Madaxweynihii Hore Ee Gal-mudug Caalin Xabad Joojin Ayay Naga Aqbaleen Dadkii Kudagalamayay Guriceel +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweynihii Hore Ee Gal-mudug Caalin Xabad Joojin Ayay Naga Aqbaleen Dadkii Kudagalamayay Guriceel +COD
Madaxweynihii hore ee maamulka Gal-mudug Maxamed Axmed Caalim oo hogaaminayay Odayaal dhaqameed ka tagay degmada Dhuusa Mareeb oo gaaray degmada Guriceel, ayaa faah faahin ka bixiyay kulamo ay la qaateen dhinacyadii ku dagaalamay degmadaasi.
Caalim oo goor dhaw u waramay Goobjoog ayaa sheegay in ugu horeen Labada dhinac ay ka aqbaleen Laba Arin oo ay ka codsadeen, taasi oo ah in marka hore aqbalaan in la dhex dhexaadin karo iyo sidoo kale in xabadda la joojiyo.
Waxa uu sheegay in Labada dhinac ay soo dhaweeyeen arinkaasi, taasina ay muujisay in la helo Nabadda horu dhac ah, mar hadii lagu guuleystay in xabadda la joojiyo.
Dhinaca kale waxa uu sheegay in hadda ay socdaan kualmo kale oo ku aadan in dhinacyada isku haya degmada Guriceel la wada hadalsiiyo si meesha looga saaro waxa la’isku haysto.
Madaxweynihii Hore ee galmudug ayaa tilmaamay in rajo wanaagsan uu shaqsi ahaan ka qabo in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo xaliyo colaadda ka jirta degmada Guriceel, dibna loo soo celiyo nabadii degmadaasi.
Ugu dambeyn ayuu Caalim ugu baaqay dhamaan waxgaradka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa gobalka Gal-gaduud in ay u istaagaan sidii lagu heli lahaa nabadda Guriceel, cid walbana ay usoo baxdo sidii ay nabadeentani uga qeyb qaadan lahayd.